Antoinette က Renee ဖရန့် (ဧပြီလ 30, 1971 ဖွား) Louisiana အတွက်အသေခံတန်းပေါ်အမျိုးသမီးနှစ်ဦး၏တဦးတည်းဖြစ်၏။
သူမနှင့်ကြံရာရော်ဂျာ Lacaze တစ်ခုကျူးလွန်သည့်အခါမတ်လ 4, 1995 တွင်, ဖရန့်တစ်ဦးက New Orleans တွင်ရဲအရာရှိအဖြစ်အသုံးချခံခဲ့ရ လက်နက်ကိုင်လုယက်မှု စားသောက်ဆိုင်နှင့်တစ်ဦးအသတ်ခံရ New Orleans ရဲအရာရှိနှင့်စားသောက်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသူနှစ်ဦးမိသားစုဝင်များမှာ။ အဆိုပါလူသတ်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်ကပိုက်ဆံဖြစ်ခဲ့သည်။
ဘယ်အချိန်မှာ Antoinette ကဖရန့်လူငယ်တစ်ဦးကမိန်းကလေးဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်လူသူမကကြီးပြင်းသောအခါ, အဖြေ, အစဉ်မပြတ်နေတဲ့ရဲအရာရှိတူညီခဲ့ဖြစ်လိုသူမ၏မေးပါလိမ့်မယ်။
သူမ 22 လှည့်လိုက်တဲ့အခါသူမကနောက်ဆုံးတော့သူမ၏အိပ်မက်တယ်။
သူမကသူမ၏လျှောက်လွှာအပေါ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာလဲလျောင်းဖမ်းမိခဲ့သည်နှစ်ယောက်စိတ်ရောဂါအကဲဖြတ်ပြီးပါကနောက်ကုမ္ပဏီတခု "ကိုငှားရမ်းကြဘူး" status ကိုအကြံပြုခဲ့ကွောငျး, ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမ၏ငှားရမ်းစေခဲ့သည်။ ကြောင်းနေသော်လည်းဖရန့်ဇန်နဝါရီလ 1993 အတွက် New Orleans ရဲဌာနနှင့်အတူတွေ့ဆုံမေးမြန်း
New Orleans ၏လမ်းများဒီလိုမြင်ကွင်းတစ်ရဲအရာရှိအဖြစ်သူမကအဖြစ်, အားနည်းကွေနှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဓိပ်ပါယျမရှိသောနယ်စပ်ဒေသ, ဖော်ပြထားအချို့ကိုအဖြစ်ပယ်သို့ရောက်ကြ၏။
ရော်ဂျာ Lacaze ပစ်ခတ်ခဲ့သူတစ်ဦးဟုလူသိများတစ်ဦးအသက် 18 နှစ်အရွယ်မူးယစ်ဆေးကုန်သည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖရန့်ကသူ၏ကြေညာချက်နှင့်ချက်ချင်း transpired နှစ်ခုအကြားဆက်ဆံရေးကိုယူဖို့တာဝန်အရာရှိကဖြစ်ခဲ့သည်။
ဖရန့်သူမက Lacaze သူ၏ဘဝတစ်ဝှမ်းလှည့်ကိုကူညီမယ့်ခဲ့သည်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သို့သော်ဆက်ဆံရေးကိုလျင်မြန်စွာတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတဦးတည်းသို့လှည့်နှင့်ဖရန့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ဖြစ်ခဲ့သည်ကျဆင်းခဲ့သည်။
ဖရန့်နှင့် Lacaze အတူတူအချိန်အများကြီးဖြုန်းစတင်ခဲ့ပြီးသူမရဲ့သူချင်းရဲအရာရှိသို့မဟုတ်သူမ၏အထက်လူကြီးကနေဖျောက်ရန်အနည်းငယ်သာပြုလေ၏။ သူမသည်သူမတာဝန်အပေါ်ခဲ့တဲ့သူတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအပေါ်သူမ၏လိုက်ပါသွားသည့်အခါသူ့ကိုသူမရဲကားကိုစီးဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
သူမသည်တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦး "ထရိန်နင်" သို့မဟုတ်တူအဖြစ်သူ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မယ်။
မတ်လ 4, 1995 တွင်, ဖရန့်နှင့် Lacze အရှေ့ New Orleans အတွက်ကင်မ် Anh ဗီယက်နမ်စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ပြ Louisiana, 11 pm မှာဖရန့်စားသောက်ဆိုင်မှာလုံခြုံရေးအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းသို့ပွေးလေ၏သောမိသားစုနှင့်အတူဖော်ရွေအသုံးအနှုန်းများအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာမကြာခဏသူမအလုပ်လုပ်ကိုင်မခံခဲ့ရလျှင်ပင်အခမဲ့သူမ၏အစားအစာပေးလိမ့်မယ်။
သူချင်းရဲအရာရှိရော်နယ်အောင်နိုင်ဝီလျံကိုလည်းစားသောက်ဆိုင်မှာလုံခြုံရေးအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်အခြားအရာရှိများအချိန်ဇယားဆွဲခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖရန့်နှင့် Lacaze တက်ပြသသောအခါသူရှိ၏။ ဖရန့်သူမ၏တူအဖြစ် Lacaze မိတ်ဆက်, ဒါပေမယ့် Williams ဟာသူတစ်ဦးထက်ပိုအခါသမယတွင်ရပ်တန့်ခဲ့သောသူတစ်ဦးလူရမ်းကားအဖြစ်သူ့ကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
ပတ်ပတ်လည်သန်းခေါင်မှာသူမ၏ညီမနှင့်ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်နှင့်အတူစားသောက်ဆိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သူအသက် 24 နှစ်အရွယ်Châu Vu, ကပိတ်ဖို့ရန်လုံလောက်သောနှေးကွေးခဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူမကစားသောက်ဆိုင်မှတံခါးသော့ကိုသူမဖရန့်နှင့်သူမ၏တူထွက်ပါစေခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောကာလကတည်းကပျောက်ဆုံးခဲ့သည်ကိုသတိထားမိသောအခါ, ပိုက်ဆံဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးနောက်ကျောမှခေါင်းနှစ်လုံးခဲ့သည်။
သူမသည်ထိုညဉ့်လုံခြုံရေးအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Williams ကပေးဆောင်ဖို့ထမင်းစားခန်းမှပြန်လာသောထို့နောက်ပိုက်ဆံရေတွက်ဖို့မီးဖိုချောင်မှအပေါ်ဆက်ပြောသည်။ ဖရန့်ရုတ်တရက်ထံသို့တံခါးကိုလှုပ်, စားသောက်ဆိုင်မှာကျောထင်ရှား၏။ Sensing တစ်ခုခုမှား, သူမနောက်ကျောသို့သွားလေ၏နှင့်မိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာပိုက်ဆံဝှကျထား, ထိုစားသောက်ဆိုင်၏အရှေ့ဘက်သို့ပြန်သွား၏။
အစောပိုင်းကထိုစုံတွဲကျန်ရစ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အပြီး, Williams ကChâuဖရန့်ကပြောကြားခဲ့သည်နှင့်သူမ၏တူမကောင်းတဲ့သတင်းခဲ့ကြသည်။ Châuပြီးသားသူကိုရွှေရှေ့အံသွားနှင့်အတူတစ်ဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင်တူသူကိုသူမ၏တူ, မြင်နေပြီးနောက်ယုံကြည်မှုဖရန့်ကိုပြု၏ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဖရန့်ပြန်သောအခါChâuရဲ့ 18 နှစ်အရွယ်အစ်ကို Quoc Vu, ဝီလျံနှင့်အတူစကားပြောခဲ့ပါသည်။ Châuသူမ၏အတွက်ပါစေခြင်းငှါမတျောမူလြှငျ, အော်ပေမယ့်ဖရန့်တံခါးကိုဖွင့်ဖို့ပျောက်ဆုံးနေ key ကိုသုံးပြီး, သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကြ၏။
ဖရန့်စားသောက်ဆိုင်သို့လမ်းလျှောက်သည့်အတိုင်း Williams ကသူမ၏အနီးသို့ချဉ်းကပ်ကာသော့ချက်ရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သူမ၏ရင်ဆိုင်, ဒါပေမယ့်သူမဟာသူ့ကိုလျစ်လျူရှုနှင့်မီးဖိုချောင်ဆီသို့ဆက်လက်သူမ၏နှင့်အတူChâuနှင့် Quoc shoving ။
ထိုအတောအတွင်းမှာတော့ Lacaze,9မီလီမီတာပစ္စတိုလက်နက်, စားသောက်ဆိုင်သို့ကြွတော်မူခြင်းနှင့်ချက်ချင်းသည်သူ၏ကျောရိုးပြတ်ရသောအနီးကပ်အကွာအဝေးမှာဦးခေါင်း၏နောက်ကျောအတွက်ဝီလျံပစ်သတ်။ Williams ကအောက်ပိုင်းသေ, လဲကျခြင်းနှင့် Lacaze သူ့ကိုသတ်ဖြတ်, ဦးခေါင်းနှင့်နောက်ကျောများတွင်သူ့ကိုနှစ်ခုထက်ပိုသောကြိမ်ပစ်ခတ်။
ပစ်ခတ်မှုစဉ်အတွင်းဖရန့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို Lacaze လှည့်နှင့်Châu Quoc ဆှဲနှင့် Vui သူတို့အမည်ရှိအနေနဲ့ဝန်ထမ်းအေး in- စားသောက်ဆိုင်ရဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်ပြေးခြင်း, အလင်းအိမ်ပိတ်ထားပုန်းခဲ့သည်။
Châu, ထို့နောက် Quoc ဂရုတစိုက်သွားခဲ့ရာကြည့်ရှုရန်အေး၏ဖန်တဆင့်ကြည့်ရှုကြ၏။ ဖရန့်နှင့် Lacaze ပိုက်ဆံကိုအသညျးကိုရှာဖွေအဖြစ်သူတို့ကစောင့်ကြည့်။ သူတို့ကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အခါသူတို့Châuရဲ့အစ်ကိုနဲ့အစ်မခဲ့ကြသည်ဘယ်မှာမှ သွား. မိမိဒူး ထောက်. သူတို့ကိုခိုင်းတယ်။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုမောင်နှမ, ကိုယ်လက်ကျင်းပဆုတောင်းနှင့်သူတို့၏ဘဝများအဘို့တောင်းစားစတင်ခဲ့သည်။
ဖရန့် LaCaze Williams ကသတ်ပစ်ရန်အသုံးပြုခဲ့တူညီသေနတ်နှင့်အတူအနီးကပ်အကွာအဝေးမှာသူတို့ထဲကနှစ်ဦးစလုံးပစ်သတ်။ ထိုအခါလူသတ်သမားများတခြားသူတွေကိုရှာဖွေလေတော့သည်။ သူတို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်းယူဆရင်, ဖရန့်နှင့် Lacaze စားသောက်ဆိုင်ရှိရာမှမောင်း။
Quoc 9.1.1 ကိုခေါ်ပေးဖို့အိမ်နီးချင်းပွေးလေ၏။ Châuစားသောက်ဆိုင်မှာတည်းခိုနေစဉ်။ သူမလည်းသူမကိုရှင်းလင်းစွာဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါကြောင်း, ။ 9.1.1 ခေါ်သော်လည်းသူမ၏အစ်ကိုနှင့်အစ်မကိုရှာတွေ့ပြီးနောက်ဒါအိမ်တွေကိုသွားပြီးကြီးနှင့် Williams ကသေပြီ။
ဖရန့်ပဲစက္ကန့်ရဲခြင်းမပြုမီစားသောက်ဆိုင်သို့ပြန်သွား၏။ Châuအမျိုးသမီးရဲအရာရှိမှစားသောက်ဆိုင်ကနေအထဲသို့ပြေး ဝင်. ကြောင့်ဖရန့်သူမ၏အပြီးအပြေးခဲ့ကွောငျးထငျရှားလေ, ဒါပေမယ့်သူမဟာအရာရှိများကရပ်တန့်ခဲ့သည်။ သူမသည်တစ်ရဲအရာရှိအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူဖော်ထုတ်နှင့်သုံး mask ကိုယောက်ျားနောက်ကျောတံခါးကိုအထဲကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။
ဖရန့်ပြီးတော့Châuချဉ်းကပ်နှင့်ဖြစ်ပျက်သူမ၏ဟုမေးနှင့်သူမပွင်ခဲ့လျှင်။ သူမရှိခဲ့သည်နှင့်အဖြစ်ပျက်ကိုသိသောကြောင့်, သူမ, ကမမေးမယ်လို့ဘာဖြစ်လို့Châu, မယုံ၌၎င်း, ကျိုးအင်္ဂလိပ်, မေးတယ်။
Châuရဲ့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည် sensing, အမျိုးသမီးအရာရှိတဦးကွာChâuဆွဲခြင်းနှင့်စွန့်ခွာဖို့မဖရန့်ကပြောကြားခဲ့သည်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းChâuဖွစျခဲ့ပွီးအဘယ်သို့ဆိုနိုင်ခဲ့တယ်။ Quoc အခင်းဖြစ်ပွားရာမှပြန်လာသောအခါသူChâuဆိုပါတယ်ခဲ့ရာအတည်ပြု။
ဖရန့်သူမကပစ်ခတ်မှုအပြီးစားသောက်ဆိုင်ထွက်ခွာပြီးနောက် Lacaze ချွတ်ကျဆင်းသွားခဲ့ဘယ်မှာပေါ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူစုံစမ်းစစ်ဆေးထောက်ပံ့ပြီးနောက်, ဌာနချုပ်ကိုလိုက်ပို့ခဲ့သည်။ သူတို့တစ်ဦးချင်းစီစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ကြသည့်အခါသူတို့ကခလုတ်ယောက်ျားသည်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှာလက်ညှိုးကိုထောက်ပြသည်။ ဖရန့်နောက်ဆုံးတော့သူမသည်ညီငယ်နှမပစ်ခတ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့် Lacaze သူမ၏ဦးခေါင်းမှသေနတ်ရှိခဲ့ပါတယ်သာဖြစ်သောကြောင့်ဟုဆိုသည်။
LaCaze ရုံးတင်စစ်ဆေးပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူဟာစားသောက်ဆိုင်မှာမဟုတ်ခဲ့ခြင်းနှင့်ဖရန့်တစ်ဦးတည်းပြုမူခဲ့ကွောငျးအဆိုပါဂျူရီစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သူကပထမဦးဆုံးဒီဂရီလူသတ်မှုသုံးခုရေတွက်၏အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်နှင့်ကလည်းဆေးထိုးသတ်တဲ့ထောင်ဒဏ်ခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ 1995 ခုနှစ်တွင်ဂျူရီအရာရှိချုပ်ရော်နယ်အောင်နိုင်ဝီလျံနှင့် Ha နှင့် Cuong Vu ၏လူသတ်မှုများအတွက်ကလည်းဆေးထိုးသတ်တဲ့မှဖရန့်ထောင်ဒဏ်။
ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်: ရော်ဂျာ Lacaze တစ်ဦးက New စမ်းသပ်မှာမှဖြစ်ပါတယ်
ဇူလိုင်လ 23, 2015 တွင်, တရားသူကြီးမိုက်ကယ် Kirby ရော်ဂျာ Lacaze ခွင့်ပြုခဲ့ အသစ်တစ်ခုကိုစမ်းသပ် ဟောင်းတဦးရဲအရာရှိဂျူရီစည်းမျဉ်းများချိုးဖောက်ခဲ့သည့်ဂျူရီပေါ်တွင်ခဲ့လို့ပဲ။ ဒါဝိဒ်သည်ဆွအဆိုပါဂျူရီလူကြီး, သူကရဲတွေနဲ့နှစ်ပေါင်း 20 အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ခဲ့ကြောင်း reveled ဘူး။
နာမည်ကြီးအားကစားကြယ်၏ခှ Shots တစ်ပြခန်း
ကင်တပ်ကီအတွက် Death Row အပေါ်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်
ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Death Row အပေါ်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်
သင်ကလျှာ-ချည်ထားသော Leave လိမ့်မည်ဒါကမာ့ခ်တွန်း Quotes
Hard Times သတင်းစာများအတွက်ခရစ်ယာန်သီချင်းများ
အဖြေများနှင့်အတူ quadratic ဖော်မြူလာသင်ထောက်ကူ
ထိပ်တန်း9Times သတင်းစာက Superman Batman Up ကို Beat
အလက်ဇန်းဒါး၏စစ်ပွဲများမဟာ: တုရုမြို့ Siege
'' အီ Est သက်သေအထောက်အထားများက 'Subjunctive လိုအပ်ပါသလား?
လုပ်ငန်းခွင်အကြောင်းထိပ်တန်း '' 80s သီချင်းများ
Jell အို gelatin ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပါသလား
Air Force One စျေး
Wheaton College မှာမက်ဆာချူးဆက် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
ရှန်ဟိုင်း vs. ဘေဂျင်း